स्क्रव टाइफस परीक्षण शुल्कमा मनोमानी, छ सय पर्ने कीटलाई तीनहजार असुली – Chitwan Post
भरतपुर । चितवनमा डेङ्गुसँगै स्क्रव टाइफसका बिरामी बढिरहेका छन् ।
यसअघि डेङ्गु परीक्षणमा दुई हजार ६ सय रूपैयाँसम्म शुल्क लिएका निजी अस्पताल एक हजारमै परीक्षणका लागि तयार भएका छन् ।
तर, स्क्रव टाइफसको पनि समस्या डेङ्गुकै जस्तो पाइएको छ । स्क्रव टाइफस कीट सप्लायर्सहरुका अनुसार चितवनको बजारमा बढीमा रू ५९० सम्ममा कीटहरु पाइन्छन् । निजी अस्पतालले आफ्नो ल्याबमा यिनै कीटहरु प्रयोग गर्ने हुन् ।
‘हामीले बेच्ने अधिकतम मूल्य भनेको ५९० हो’, केमिकल एण्ड मेडिकल सप्लायर्स एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य महेश भट्टराईले भने ।
कीटलाई ५९० भनिए पनि परीक्षणको क्रममा निजी अस्पतालहरुले तीन हजार रूपैयाँसम्म लिएको पाइएको छ । खरिद मूल्यको पाँच गुणा बढाएर निजी अस्पतालले बिरामीबाट शुल्क उठाइरहेका छन् । अस्पतालमात्रै नभएर ल्याबहरुले पनि फरक–फरक मूल्य लिइरहेका छन् । एनआरएलले १२ सय लिने गरेको छ भने आरडीएलले १८ सय लिने गरेको छ ।
डेङ्गुको विषयमा बोले पनि जनस्वास्थ्य, महानगर, जिल्ला प्रशासनलगायतका जिम्मेवार कार्यालयहरुले स्क्रव टाइफस परीक्षणमा भएको लुटबारे बोलेका छैनन् । डेङ्गुको तुलनामा स्क्रव टाइफस बढी खतरायुक्त मानिन्छ । ढिला गरी उपचार भएमा बिरामीको ज्यानै जान सक्ने डाक्टरहरु बताउँछन् । परीक्षण तरिका फरक हुने भएकाले मूल्य फरक पाइनु स्वाभाविक रहेको निजी अस्पताल सञ्चालकहरु बताउँछन् ।
तीन वर्ष पुरानो रेट
चितवनका निजी अस्पतालहरुले तीन वर्षअघि विभिन्न सेवा शुल्क निर्धारण गरेका छन् । अस्पतालमा सेवा एकै खाले भए पनि बिरामीसँग लिने शुल्क भने जथाभावी भएको गुनासो आएपछि निजी अस्पतालकै सक्रियतामा तीन वर्षअघि शुल्क निर्धारण गरिएको निजी अस्पताल समन्वय समिति चितवनका सचिव विक्रम अधिकारीले बताए ।
निजी अस्पतालमा सबै सेवाहरुको सकेसम्म एकै खालको रेट निर्धारण गर्ने प्रयास भए पनि केही निजी अस्पतालले रेटको बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । सचिव अधिकारीले अबको केही दिनभित्रै पुनः शुल्क समायोजन गरिने बताए । त्यसका लागि अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ । निजी अस्पतालले स्क्रव परीक्षणको २५ सय शुल्क तोकेको छ ।
के हो स्क्रव टाइफस ?
मुसा प्रजातिको जीवमा बस्ने माइट नामक किर्नुको टोकाइबाट यो रोग लाग्छ । यसको नियन्त्रणतर्फ चासो नदिए यसले पनि डेङ्गुझैँ महामारीको रुप लिन सक्ने भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरुले सचेत हुन आग्रह गरेका छन् । संक्रमित व्यक्तिलाई अत्यधिक टाउको दुख्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, १०३ देखि १०४ डिग्रीसम्म ज्वरो आउने, जीउ दुख्ने, आँखा हल्का रातो हुने, पसिना बढी आउनेलगायत लक्षण देखिन्छ ।
चितवनमा साउनदेखि हालसम्म ५५ जना संक्रमित भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनले जनाएको छ । यो रोगबाट चितवन जिल्लामा एक बालकको केही दिनअघि मृत्यु भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कसले कति असुल्छन् ?
सप्तगण्डकी अस्पताल २५ सय
नारायणी सामुदायिक २६ सय
चितवन मेडिकल कलेज ३ हजार
एभरेष्ट अस्पताल १५ सय
ओम अस्पताल २ हजार
रक्षा हस्पिटल २५ सय
शान्ति अस्पताल २१ सय
नेसनल सिटी २५ सय
श्री पुष्पाञ्जली अस्पताल १८ सय
चितवन अस्पताल २५ सय
मौलाकालिका अस्पताल १५ सय ३०
चितवन मोडल अस्पताल २५ सय
एनआरएल ल्याब १२ सय
आइआरएल ल्याब १५ सय
आरडीएल ल्याब १८ सय
सिड ल्याब्रोटरी १५ सय २०